ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်းများ-၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်းများ-၄
Posted by naywoon ni on Nov 26, 2010 in Cultures, Drama, Essays.., History, Think Tank | 17 comments
ဆင်းရဲရခြးအကြောင်းများ အလှူ ၄
ကျွန်မကတော့ ၁၀% ထဲမှာပါတယ် …
ယုကိုစောင်းပြောနေသလိုပဲအိမ်မက်မက်ရင်တော့ နှစ်လုံးထီထိုးဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့်တစ်ခါမှ မပေါက်ဘူး၊ အလွန်အကျွံတော့မလုပ်ပါဘူး၊ ယု့သူငယ်ချင်းတွေလေ သုံးလုံးနှစ်လုံးထိုးလို့ တိုက်ခန်းနှစ်ခန်းပြောင်သွားတာ ယုလက်တွေ့တွေ့ဖူးတယ်၊ သူတို့က မပေါက်လေ မဲထိုးလေနဲ့ ရှိတာ အကုန်ပြောင်ရော၊
ချဲဒိုင်တွေအကြောင်းသိရင် ရေးပါအုံး။ တကဲ့ဒိုင်ကြီးတွေကိုပြောတာပါ။ ကျနော်ကတော့ အရေးအခင်းပြီးကာစ မုန့်မစားပဲ ၂၅ကျပ်ဖိုး ချဲထိုးပြီး မပေါက်ကထဲက စိတ်နာသွားတာ ယနေ့ထိပဲ။
ကျနော်လည်း bigcat လိုပဲ။ သူငယ်ချင်းက ချဲရောင်းတော့ အားပေးပါဦးဆိုလို့ ၅၀ ပြား (ငါးမူး) ဖိုး တစ်ကွက် ထိုးဖူးတယ်။ အဲဒါ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးပါပဲဗျာ။
ရွာမှာ မုန့် လက်ကောက် ရောင်းတဲ့အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်
တစ်နေ့ ရောင်းတစ်နေ့ စားပေါ့ဗျာ
တစ်ညနေမှာ ချဲထွက်တဲ့ အချိန် ဘယ်ကောင်က နောက်လိုက်တယ်မသိဘူး
ချဲထွက်ပြီဆိုပြီး ဂဏန်းတစ်ခုကိုပြောလိုက်တော့ ပေါက်ပြီပေါ့ သူ့ ခမျာ ဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း
စေတနာကတော့ ဘာထက်သလဲမမေးနဲ့ 
မုန့် ဘန်းကြီးကို ချပြီး စားကြ တစ်ပြားမှ မပေးနဲ့ လှူခြင်နေတာကြာပြီ..
အလကားကျွေးတယ်ဆိုတော့ ဝိုင်းလွေးတာ ဘာကြာမလဲ
နောင်ဆို ဒီထက်ပိုပြီး ပေါက်ပါစေဘာညာပေါ့ သူ့ ခမျာ ပီတိတွေကို ဖြာလို့ 
မကြာပါဘူး အမှန်အကန် ဂဏန်းက ထွက်လာတော့ သူထိုးထားတဲ့ အကွက်မှ မဟုတ်ဘဲ
အဲ့ကြတော့ ပွဲကြမ်းတယ်ဗျို့ 
ဖေတော့ မောင်တော့ တစ်မျိုးလုံး တစ်ရွာလုံး ကို ပတ်ဆဲတော့တာပါဘဲ
ဘယ်သူ့ ကို ဆဲတာလဲပြောတော့ ဟိုလူလိုလို ဒီလူလိုလိုနဲ့ 
ခုဏက ပြောတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှန်းကို မသိဘူးလေ တစ်ယောက်စကားတစ်ယောက်ဆိုတော့
အဲ့ဒါနဲ့ ပဲ သူ့ ခမျာ အရင်းရအောင် မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ မနည်း ပြန်လိုက်တောင်းယူရတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ အမှန်ကန်အတိကြ ပေါက်ပြီပေါ့ မြို့ ဒိုင်မှာ ပေါက်တာ အောဒိုင်ခေါ်တယ်
ရွာအခေါ် ကတော့ အောင်ပွဲခံတာပေါ့ဗျာ ပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း
ဘဲတွေကြက်တွေ ကို ထန်းရည် အရက်တွေနဲ့ ဆော်ကြတာ ဝေဿန်တရာ လှည်းမှောက်သလိုပေါ့
နောက်နေ့ ကြတော့ ဒိုင်ပြေးလေသတည်း (ပြေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ ဒေသခံ ရဲစခန်းနဲ့ ညှိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ဒိုင်အဖန်းခံရတယ်ပေါ့)
အဲ့ဒါနဲ့ ကုန်ကြစရိတ်လေးတွေ မနည်းအသနားခံ တောင်းလာပြီး
နောက်ခါ ရွာမှာ လာရောင်းရဲရောင်းကြည့်ပေါ့
ဒါနဲ့ ဘဲ နောင်လဲ ဒီလိုဘဲ ရောင်းနေ ထိုးနေကြတာပါဘဲ
ဘိုးတော်တွေ ရသေ့တွေ ဘုန်းကြီးတွေ အရူးတွေ နတ်တွေ စုံနေတာပါဘဲ နောင်များကြုံရင် ပြောကြသေးတာပေါ့
ရေးတော့မယ် “မပေါက်စကောင်း ပေါက်စကောင်း ”
မကြာမီ လာမည် မျှော်…………………………………………………..
မပေါက်စကောင်း ပေါက်စကောင်း များ လုပ်မနေနဲ့.. ပေါက်ကို ပေါက်မှာ.. မယုံဘူးလား.. ရော့.. ဒီမှာ လျှာပွတ်ဆေး.. စံချိန်မှီတယ်.. ခံတွင်းရှင်း အစာကြေ လေကြေ ဘွတ်ဘွတ် လျှာပွတ်ဆေး..
ချဲနှင့် နှစ်လုံး ပါလာတော့ အတွေ့အကြုံတချို့ ၀င်ရေးပါရစေ ..
သုံးလုံး လောက ကို ၁၉၈၉ လောက်မှာ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် .. ၀င်ကြည့်တဲ့ တတိယလမှာ တစ်ခါတိုက်ပါတယ် .. နောက် ငါးလကြာတော့ တစ်ခါတိုက်ပါတယ် .. ဒါတောင် ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ပေါ့ .. အိမ်ထောင်မကျသေးတော့ လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြည့်ခဲ့တာပါ .. နောက်ထပ် မတိုက်တော့ဘူး .. သင်္ချာ ပြန်တွက်ကြည့်တော့ ရထားသမျှ ကုန်ပြီ .. မကြာခင် အိတ်ထဲက ပြန်ထွက်တော့မယ် လို့ မြင်တော့ ရပ်လိုက်တယ် .. (ကိုယ်က ရတာပဲ ဖြစ်ချင်တာကိုး) ..
နှစ်လုံး ဆိုတာလဲ ဒီလိုပဲ ပထမဆုံး အိပ်မက်ကို အဓိပ်ပါယ် ရမ်းကောက်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေပြီး ရခဲ့တယ် .. နှစ်ခါလားပဲ တိုက်ပါတယ် .. အခါနှစ်ဆယ်လောက် မတိုက်တော့ ရပ်လိုက်ပါတယ် ..
အတိတ်စိမ်းပေးတဲ့ စာရွက်တွေ ဘယ်လိုထွက်လာသလဲ ဆိုတာကိုလဲ သိလိုက်ရပါတယ် .. ၀ါသိင်္ခ ဆိုတာကလဲ .. သူ ကိုယ်တိုင် ထိုးတာ မပေါက်ပဲရှိတာကုန်သွားလို့ နောက်ဆုံး ဒီစာရွက်ထုတ်ရောင်းမှ သူကြွယ်ဖြစ်လာတာ .. အကြားအမြင်သမားတွေ ဆိုပြီး နံပါတ်ပေးတဲ့လူတွေလဲ သူတို့ ပေးတဲ့နံပါတ်ကို သူများထိုးရင် ပေါက်ကြပါတယ် .. သူတို့ကိုယ်တိုင် လောဘ တက်လာပြီး ဟောလဲဟော .. ထိုးလဲထိုး လုပ်လာကြတော့ .. အရင် ဟောလို့ ရထားတာတွေ ကုန်သွားတဲ့ အပြင်ကို သူတို့ဟောတာတွေလဲ မမှန်တော့ဘူး ..
ဒီတော့ ပြန်တွေးကြည့်ပြီးမှ သြော် .. ထီတောင်မှ ထောင့်ငါးရာ တစ်ခါ တစ်သောင်း တစ်ခါ ပေါင်း နှစ်ခါလေး ပေါက်ခဲ့ပါတယ် .. သုံးလုံးဆိုလဲ နှစ်ခါ .. နှစ်လုံးမှာ နှစ်ခါ ဒါပဲ ပေါက်ခဲ့တာ .. ဘ၀များစွာမှာ ဒီလို အလွယ်ရမယ့် ကံ မပါဘူး ဆိုတာကို ယုံလိုက်တဲ့ နောက်ပိုင်း နှစ်လုံး သုံးလုံးကို ရှောင်လိုက်ပါတယ် ..
(မှတ်ချက် ။ ။ ၁၉၈၈-၈၉ ကာလတုန်းက မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်းလဲ ဒိုင်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် .. တစ်ပတ်မှာပေါ့ .. ဒိုင်ကွဲဂဏန်းကြောင့် အတော်ပေါက်ကြပေမယ့် စစ်တပ်ကို ဘယ်လိုစည်းရုံးလိုက်လဲ မသိဘူး .. လက်ခွဲဒိုင်တွေ ကျော်ဟိန်းရဲ့ အိမ်ပတ်လည်မှာ အစောင့်တွေလို ချထားပြီး လုံးဝ မလျော်ခဲ့တာကြောင့် တစ်ချို့သော လက်ခွဲတွေ အိမ်တိုင် ချွတ်လိုက်ရတာကို ပြန်လည် ဖောက်သည်ချပါရစေ ..အတင်းတော့ မဟုတ်ပါ .. သူများနောက်ကြောင်းကို ဖော်တာလဲ မဟုတ်ပါ .. အဖြစ်မှန်ပါ .. ဒီလိုလူတွေလဲ ဒီလိုင်းက မကင်းခဲ့တာကို သက်သေပြချင်လို့ပါ ..)
ချဲထီလောင်းကစား ၀ိုင်းစကားက ယခုဆရာကြီးတွေရဲ့ ကျင့်ထုံး နည်းပညာပါ။
ဒဲ့ပေါက်လဲ မလျော်ဘူး၊ တွတ်လဲ မပေးဘူး၊ ဒိုင်လဲ မပြေးပါဘူး တဲ့။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကို တက်တိုင်လဲ ဂရု မစိုက်ပါဘူး တဲ့။
စကားစပ်ပြောရရင်.. အဲဒီချဲထီလောင်းကစား အပါအ၀င် ကာစီနိုစတဲ့ လောင်းကစားတွေကို .. သယံဇာတ၊ ပရံကတ ဘာမှမထွက်၊မရှိတဲ့ ပြည်နယ်၊ မြို့ နယ် ၊ဒေသ တခုခုကို လိုင်စင်ပေး တရားဝင်လုပ်ခိုင်းဖို့သင့်တယ်..။
အလုပ်အကိုင်တွေ ထွက်လာသလို ..လိမ်တာ၊ ကောက်တာ တွေလည်း လျှော့နည်းမှာပဲ..။
ကိုကိုးကျွန်းကို ..လိုင်စင်ချပေးပြီး.. တရားဝင်လုပ်ဖို့ ..နိုင်ငံတော်ကို အကြံပေးလိုပါကြောင်း…နဲ့ တခြားပြည်နယ်-ဒေသတွေမှာ လုပ်ကြရင် အပြင်းအထန် အေ၇းယူစေလိုပါကြောင်း..။
ဟုတ်တယ် နှစ်လုံးတွေ …..သုံးလုံးတွေဘာမှမကောင်းဘူး ….တို့ကတော့ တစ်လုံးပဲ(ဘောလုံး) ….:P
ပေါက်ပြီ ပေါက်ပြီ ပေါက်ပြီ
ကိုပေါက်ရေ ဘယ်လောက်များပေါက်သွားလို့လဲ ဟင်
ကျွန်တော်တော့ ဆေးလိပ်မီးဖွားတွေပဲ ခဏခဏ ပေါက်နေတယ် ဗျ
အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူမှ ကျွန်တော့နား မလာရဲကြဘူး သိလား?
အဘနီ ဒီပုံစံဆို.. ဆေးလိပ်သောက်လို့ မီးပွားပေါက်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူး.. မီးရှူးမီးပန်း ဖွားကနဲ ကျတာ ဖြစ်မယ်။
နှစ်လုံး ဆိုလို့ …….ရသေ့တစ်ပါတွေ့ဖူးတယ်။ သူက ကဏန်း ပေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ လုပ်ကွက်က အတော်ကလေး ဥာဏ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလည်းဆို
တော့ သူက ရပ်ကွပ်ထဲက အိမ်တွေ အိမ်တွေ ရှေ့ လိုက်ပြီး အလှူ ခံတယ်။
သူကို လှူတဲ့ အိမ်ဆိုရင် သူ သပိတ်ပေါါ်မှာ လိပ်ထားတဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်ကိုပေး
လိုက်တယ်။ မလှူရင်မပေးဘူးပေါ့။ သူပေးလိုက်တဲ့ လူကပေါက်ရင် နောက်နေ့ သူကိုပူဇော်ပေါ့ ။ပိုလှူပေါ့။ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ လုပ်ကွက်လည်း သူကညနေ သူ့ကျောင်းလားအိမ်လားတော့မသိဘူးပေါ့။ပြန်
ရောက်ရင် သူ က စာရွှက်လေးတွေမှာ ၀၁ ကနေ ၉၉ ရှိတဲ့ ကဏန်း အလုံးတရာသူရေးထားပြီးမဲလိပ်ထားပြီး သားလေ ။ ဒီတော့ သူ့ ဂဏာန်းက တစ်ယောက် မ ဟုတ်တစ်ယောက်တော့ပေါက်မှာ သေချာတယ်လေ။ ဒဲမပေါက်တဲ့ လူတောင် ဟယ်နည်းနည်းလေးပဲ နေရာလွဲသွားတယ်..မှန်တယ်..ပေါ့။ တစ်လုံးတူတဲ့လူကျတော့လည်း ဒီရသေ့က ၀မ်းချိန်းလေးတော့အတော်မှန်တယ်။ပေါ့..။ အတော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပြောတာပဲ…။